Large-format Ikanam meziri bụ akụkụ dị oké mkpa nke Digital Site Home odida obodo
Ha na-enye a na-agbanwe, digital n'elu ikpo okwu na-eme ka ụdị ndụ na jikọọ na-akpọsa ngwá ahịa na-eji ọkụ na ezigbo echiche ahụ na-ịzụta.
E nwere ọtụtụ nhọrọ na-emeghe ka venues na-achọ inwere iji wụnye ihe Ikanam ihuenyo na ọtụtụ n'ime Adi si ahịa họọrọ ihe nlereanya nke ihuenyo nwe.
Screen nwe-enye a gbara ọkpụrụkpụ ikpe n'ihi na ogologo oge ego uru na nsị retail venues na ndị nwe ha na a siri ike azụmahịa ọnọdụ ebe media nkwekọrịta na mgbasa ozi na ụtụ na-enwe nchegbu. Mgbe na ihuenyo ngwaike-akwụ ụgwọ ndị na-adịghị mkpa, uru ụtọ site ahịa mgbe ha dee na-azụ ha Ikanam media ihuenyo bụ obosara-eru. Ọtụtụ ndị recouped-eri nke ha na ihuenyo n'ime a 12-18 ọnwa oge.
Agbakwụnye, onye amara revenue iyi
Ere mgbasa ozi ohere na gị na ụlọ ahịa Center Ikanam Screen nwere ike ịbụ oké revenue iyi. Ikanam Ákwà nwere ike na-egosipụta multiple Mgbasaozi ekwe ka ị na-ere a ele mmadụ anya n'ihu ike, ma jigide ngwaọrụ maka gị onwe gị mkpọsa. Large Format Njirimara Ákwà na ụlọ ahịa ebe a na-elu okporo ụzọ ebe ma na-abịaru a otutu anya na nke a pụtara adịchaghị ịnye ọnụahịa maka mgbasa ozi ohere.
Inweta ihe tenants
Ọ bụrụ na gị nwere tenants na-ahọrọ n'etiti multiple ụlọ ahịa ebe a Large Format Ikanam Screen gị center nwere ike ime ka ihe dị iche. On top nke image ya ọnọde, ikike nwere ahịa gị ahịa na center ọ na-emi odude na-enye oké ohere. Agbakwụnye, a free obere okwu òkè nke ngosi nwekwara ike ga-eji na-nwere tenants n'elu akara